SN 1054 ဆူပါနိုဗာနှင့်ဆက်နွယ်သော ဂဏန်း နက်ဗျူလာ
ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ်အား အစောဆုံး မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သူမှာ အေဒီ ၁၈၅ ခုနှစ်တွင် SN 185 အား တရုတ် နက္ခတ္တပညာရှင်များဖြစ်သည်။ SN 1006 သည် တရုတ် နက္ခတ္တပညာရှင်နှင့် အစ္စလမစ် နက္ခတ္တပညာရှင်တို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော အတောက်ပဆုံး ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ဆူပါနိုဗာ SN 1572 နှင့် SN 1604 သည် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီတွင် ဖြစ်ပွားသော သာမန်မျက်စိဖြင့်တောင် မြင်ရသည့် ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ်များပင်တည်း။ ဆူပါနိုဗာ SN 1054 သည် ဂဏန်း နက်ဗျူလာအား မွေးထုတ်စေခဲ့သည်။ တယ်လီစကုပ်များ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆူပါနိုဗာအားလေ့လာသည့်အခန်းသည် ပိုမို ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် အင်ဒရိုမီဒါ ဂလက်ဆီမှ ဆူပါနိုဗာများအား လေ့လာနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၁ ခုနှစ်တွင် အာမေရိကန် နက္ခတ္တပညာရှင် Rudolph Minkowski နှင့် Fritz Zwicky တို့သည် ခေတ်သစ် ဆူပါနိုဗာ ခွခြားမှုပညာရပ်များအား စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်မှ အဝေးဆုံး ဆူပါနိုဗာတို့၏ အလင်းသည် မျော်လင့်သည်ထက် ပိုမှိန်သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ ယင်းသည် မဟာစကြာဝဠာ ပြန်ကားနေသည်ဟူသောအဆိုကို ထောက်ခံပေးလျက်ရှိသည်။
ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ်များသည် အင်မတန် ဖြစ်တောင်ဖြစ်ခဲလှသဖြင့် ယင်းတို့ကို ခြေရာခံမိရန် ဂယ်လက်ဆီအများကြီးအား ပုံမှန်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပေသည်။ အခြားသော ဂယ်လက်ဆီများထဲမှ ဆူပါနိုဗာများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သူတို့အား ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင် ယင်းတို့သည် ဖြစ်နေနှင့်ပြီးသား ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဝါရင့် နက္ခတ္တပညာရှင်များသည် ဓာတ်ပုံဟောင်းများအား နှိုင်းယှဉ်ကာ ဆူပါနိုဗာများအား ဝေးလံသော ဂယ်လက်ဆီများဆီသို့ ရှာဖွေစူးစမ်းလျက်ရှိသည်။ ၂ဝ ရာစုအဆုံးတွင် နက္ခတ္တပညာရှင်များသည် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များဖြင့် ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ်များအား အမဲလိုက်ခဲ့ကြသည်။ မကြာသေးခင်က ဆူပါနိုဗာ ကြိုတင်သတိပေးစနစ် (SNEWS) ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီအတွင်း ဆူပါနိုဗာဖြစ်ရပ်အား ကြိုတင် သတိပေးရန်ဖြစ်သည်။
နဂါးငွေ့တန်း ဂယ်လက်ဆီအတွင်း ကြယ်ဘီလူးကြီးပေါင်းများစွာသည် နောက်ထောင်စုနှစ်အတွင်း ဆူပါနိုဗာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အကြံပေးထားသည်။ ယင်းတို့တွင် Rho Cassiopeiae, အိသာ ကရိနီ RS Ophiuchi, U Scorpii, VY Canis Majoris, Betelgeuse နှင့် Antares တို့ပါဝင်သည်။ အနီးဆုံး ဆူပါနိုဗာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောကြယ်မှာ IK Pegasi (HR 8210) ဖြစ်ပြီး အလင်းနှစ် ၁၅ဝ အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ ယင်းသည် Type Ia ဆူပါနိုဗာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
စူပါနိုဗာ နှင့် သက်ရှိ
Giacobbe, Frederick W. (2005). "HowaType II Supernova Explodes".
Schawinski, Kevin et al. (2008). "Supernova Shock Breakout fromaRed Supergiant".
Ackermann, M. et al. (2013). "Detection of the Characteristic Pion-Decay Signature in Supernova Remnants". Science 339 (6121): 807–11.
Osterbrock, Donald E. (2001). "Who Really Coined the Word Supernova? Who First Predicted Neutron Stars?".
Adams, Scott M.; Kochanek, Christopher S.; Beacom, John F.; Vagins, Mark R.; Stanek, Krzysztof Z. (2013). "Observing the Next Galactic Supernova".
Svirski, Gilad; Nakar, Ehud (2014). "Sn 2008D: A Wolf-Rayet Explosion ThroughaThick Wind".
Barbon, Roberto; Ciatti, Franco; Rosino, Leonida (1979). "Photometric properties of type II supernovae". Astronomy and Astrophysics 72: 287.
Frail, Dale A.; Giacani, Elsa B.; Goss, W. Miller; Dubner, Gloria M. (1996). "The Pulsar Wind Nebula Around PSR B1853+01 in the Supernova Remnant W44".